I-spoon yesiliva kuzinyo lokuqala
Ukubeletha Izingane ezingaphansi konyaka owodwa ubudala
Ngokuqinisekile abantu abaningi baye bazwa ngomkhuba wokunikeza i-spoon yesiliva kuzinyo lokuqala, kodwa bambalwa abantu abakucabangayo ngesisekelo sayo. Eminyakeni yamuva, ngenxa yokuthuthukiswa kobuchwepheshe be-digital kanye ne-intanethi, ulwazi luye lwatholakala kabanzi, izimpawu ezihlukahlukene nezinkolelo-ze ukuthi ugogo wethu nomama bangalandelwa ngokungahambisani nabo babhekene nokugxeka okungenangqondo futhi behlambalaza. Ngakho-ke, abazali abaningi abancane babonisa izingane zabo ngokuzithoba izihlobo nabangane ezinsukwini zokuqala zokuphila, babambe izithombe zabo ngokuzithandela, banqume izinwele zabo, bangalindeli ukukhumbula usuku lokuqala futhi benze ezinye izinto eziningi ngaphandle kokubuka emuva endala, ngezinye izikhathi ukuvinjelwa okungenangqondo. Ukungaqapheli kukhona izinkezo ezizinikele futhi zesiliva, njengesipho sezingane ezisanda kuzalwa. Abazali abaningi bakhetha "ukuhleleka" futhi benze izipho ezingenangqondo, becabangela isiko esingasasebenzi, kanye nensipho - ukungenangqondo. Futhi, endleleni, ngeze. Ake sizame ukuthola imininingwane yokuthi kungani ingane idinga i-spoon yesiliva.
Kungani banikwa i-spoon yesiliva?
Imikhiqizo yesiliva ayinhle kuphela, kodwa futhi ayinakuphika. Ngakho-ke, isayensi yanamuhla ineqiniso lokuthi i-silver ions iyakwazi ukubhubhisa izinhlobo ezingu-650 zezinhlobo ezincane zezincane ezincane, kuhlanganise nezifo eziphilayo, ezibangela amathumbu nezinye izifo. Izakhiwo zokucwilisa i-disinfection zesiliva ziphindwe izikhathi eziyisihlanu kune-lime ne-chlorine. Ngaphezu kwalokho, iyakwazi ngesikhathi esifushane ukunciphisa nokususa ubuthi emzimbeni.
Emithini yemithi isetshenziselwa kabanzi okuthiwa "amanzi esiliva", etholakala ngenxa yokuthi "ukushaja" uketshezi ngezindwangu zensimbi enhle. Isetshenziselwa ukuvimbela izifo ezihlukahlukene zokuphefumula, umkhuhlane, kuqinisa ukuzivikela okuvamile futhi kuthuthukise umzimba.
Ngakho-ke, impendulo yombuzo othi kungani i-spoon yesiliva inikezwa ine incazelo ewusizo. Lesi sipho sivame ukuhlelwa isikhathi sokubonakala kwezinyo zokuqala, emva kwalokho, njengomthetho, ukukhishwa kokuqala kuqaliswa. Ukuze unike ukudla kokuqala kusuka ku-spoon yesiliva kuphephile, akugcini nje ukuthi ionizes ukudla, kodwa futhi ibulala amabhaktheriya emlonyeni nasemanzini omntwana. Ngakho ingane eyadla ubisi kuphela kamama futhi manje isengozini yokuthola ukutheleleka kokudla okusha, "ikhambi" elengeziwe livela.
Kukholelwa ukuthi umkhuba wokunikeza ingane isiliva sesiliva ubuyela emuva ezindabeni zeBhayibheli. Phakathi kwezipho ezalethwa amantombazane omntwana uJesu, kwakunezihloko zegolide. Kodwa, kusukela ezikhathini zasendulo, ngesivinini esikhulu nangesizotha kwakuyisiliva, umntwana osanda kuzalwa wanikezwa umhlobiso wesiliva noma uhlamvu lwemali njengophawu lokuphila okucebile nokujabulisayo. Isiko saqhubeka - ngosuku lokuqala lwesikole, i-grammar-teaser yanikezwa isipuni ngosuku lokuqala kwezifundo kanye nesantanethi ngosuku lokuqeqesha. Spoon - uphawu lokukhula, ukuthola ukuzimela.
Ubani okufanele anikeze isipuni sesiliva?
Uma injongo ebonakalayo kanye nokufanekisa kwesipho esinjalo konke kucacile, ngakho-ke mayelana nokuthi ubani noma nini enikeza i-spoon yesiliva, kukhona amaphuzu okubuka ahlukene. Omunye wabo, njengoba kukhulunywe ngenhla, usekela umkhuba wokunikela i-spoon kuya ngezinyo zokuqala. Imisebenzi ehloniphekile yokwenza isipho ifakwe kulowo ozozithola izinyo kuqala.
Futhi kukhona umbono wokuthi i-spoon yesiliva kufanele inikezwe ngu-godparents kuya ku-christening. Indlela enengqondo kakhulu, ngoba, ngakolunye uhlangothi, ikhulula abazali ngokusetshenziswa kwemali eningi, futhi ngakolunye uhlangothi ixazulula inkinga yesipho kubanikazi bomama. Amathoyizi angahle aphule, izingubo zizobe zingenakwenzeka, futhi isipuni siyoba isipho esingakhohlwa futhi esiwusizo. Ukuze wenze lesi sipho senzeke ngokwengeziwe, ungenza umdwebo wokunikela ngomnikelo wesiliva, uhlobo "lomlayezo esikhathini esizayo."
Kodwa-ke, uma isipuni ngesizathu esithile ingane yakho ayinikezwa, zama ukuzithenga ngokwakho. Cabanga ngalokhu - uchitha inani elimangalisayo ngenyanga ngayinye kuma-diapers atholakalayo namathoyizi, ezithakazelisayo, eqinisweni, ngaphezulu kuwe ngaphezu kwengane, ngakho-ke kungenzeka ukuthi kufanele uthenge umntwana futhi into ewusizo ngempela.
Kungani ingane ikhotha futhi ikhale ngesikhathi sokudla?
Amabhodlela wezingane ezisanda kuzalwa
Indlela yokuphatha impumu egijima emntwaneni osanda kuzalwa?
Izinyathelo zokuthuthukiswa kwengane kuze kube unyaka owodwa
Izinsana zangaphambi kwesikhathi
Ingane 3 izinyanga: ukuthuthukiswa kanye kwengqondo
Ukulungiselela imisipha yengane yokukhahla
Igumbi lamantombazane lomfana
Kungenzeka yini ukuthi izinsana zibukele i-TV?
I-Jaundice ezisanda kuzalwa - imiphumela
Izingxube ze-hypoallergenic zezingane ezisanda kuzalwa
Ungasiza kanjani abantwana ngokuqokwa?
Indlela yokuphatha i-herpes emqaleni wengane?
UJustin Theroux uvumile ukuthi uJennifer Aniston uyathokozisa ngesilevu sakhe
Inyosi iphethwe ngamatamatisi
Ama-slippers afudumele ekhaya
I-Apple puree yabantwana
Izingubo zasebusika ngoboya bemvelo
Izinwele ze-Women's Stylish's Haircuts 2014
I-compote yama-raspberries ebusika - zokupheka okumnandi zokulondolozwa okuwusizo
Ukukhiqizwa kokudala okungama-25 ongazange ukwazi ngakho
Eschsolcia - ukutshala nokunakekelwa
Izindawo ezingu-20 eScotland, ezivela emabhukwini ezincwadi-fantasy
Yiziphi amavithamini ase-gooseberries?
Ukwesaba izimbobo zeqoqo
Amabhisikidi Omnyaka Omusha "Okhulayo" - isidlo sokuqala
Yiziphi izibuko ezifashisayo ngo-2014?
I-nuchal lymph nodes
Amacengezi angaphansi kwama-fashion 2016
Isisindo sokulahlekelwa kwesisindo